Maxaad ka ogtahay Saameynta Waxbarasho & mida Caafimaad uu sababi karo Taabuuga? – SOMA: Somali Media Association
Maxaad ka ogtahay Saameynta Waxbarasho & mida Caafimaad uu sababi karo Taabuuga?
Shan illaa Lix sano kahor waxa aad loo yaqaanay qaadka, sigaarka, badeecada oo shiishada ah, tubaakada iyo calaqa, balse waxaa ka dambeeyay oo dalka yimid maandooriye ka gedisan intaas oo dhan, qaab isticmaalka, kana fudud isla markaana ay qabatimeen in badan oo kamid ah jiilka aan looga baran maandooriyayaasha.
Kuma cusuba maqalka dhagahaaga oo waxay ila tahay inaad maqashay maandooriyaha Taabuuga.
Taabuugu waa tubaako farsameysan oo casri ah, waxaa la qiyaasaa inay soo baxday horraantii 1930-kii iyada oo siyaabo kala duwan u gaartay wadamada adduunka.
Adeegsiga taabuuga wuxuu ku badan yahay dhalinta Soomaaliyeed iyaga oo u isticmaala awood siinta jirka iyo inay firfircooni ka helaan. Qaarkood kama heystaan faham buuxa waxa yaabaha uga imaan kara.
Goobaha ugu badan ee lagu isticmaalo Taabuuga, waxaa lagu sheegay in ay tahay, goobaha waxbarashada. Ardayda ayaa ah kuwa isticmaala maandooriyahan oo ay bahda caafimaadka ugu yeereen dilaha dahsoon.
Goobo ganacsi oo u dhaw meelaha Waxbarashada ayaa lagu iibiyaa Maandooriyahan, taas oo u fududeyneysa in ardaygu si sahlan ku helo.
Maxamed Xuseen waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata mid ka mid ah iskuulada Muqdisho, waxa uu sheegayaa, in uu bilaabay isticmaalka Taabuuga bishii May ee sanadkii 2019-kii.
Maxamed oo ku jira da’da Labaatanka sano, ayaa dhigta Fasalka 11-aad ee Dugsiga sare, waxa uu tilmaamay in saaxiibadii ay uu la socday, ay isticmaalayeen Taabuuga, isagana sidaa uu ku bartay.
Waxa uu ku fikirayaa sidii uu isaga dhaafi lahaa, balse waxa uu ii sheegay in uu dareemayo culeys ah, in uu qabatimay, oo uusan iska dhaafi Karin, isaga oo og dhibaatada uga imaan karta.
Maxamed mudo kabadan Shan sano oo uu isticmaalayo, maalintii laba jeer, ugu yaraan, waalidkii ma ogaan, maadaama uu ka qariyo.
“Waxaan u haystay wax caadi ah, saaxiibadeey ayaa isticmaali jiray, aniga waxaan islahaa iska baroobee, laakiin waan qabatimay hadda. Mudo kabadan Shan sano Ayaan isticmaalayaa Taabuuga, balse ma oga Waalidkey, sababtoo ah waan ka qariyaa, ma ogala iyaga. Maalintii waxaa isticmaalaa ugu yaraa Laba jeer, waan isku dayey in aan joojiyo, laakiin waan iska dhaafi la’ahay hadda”.
Macallin Aadan Ibraahim, oo mudo Sideed iyo Toban sano bare ah, ayaa sheegaya in dhibaatada ay kala kulmaan ardayga marka uu isticmaalo Taabuuga ay ugu weyn tahay in uusan waxba ka maqlin Macallinka, iyo in iyada oo la fadhiyo Fasalka uu arbushaad ka sameeyo.
Waxa uu sidoo kale sheegayaa, in inta badan ardayda isticmaasha Taabuuga, ay ka dadaal yar yihiin, kuwa kale, marka laga qiimeeyo Imtixaanada.
Macallin Aadan ayaa SOMA u sheegay in xilliyada qaar ay u sameeyaan wacyigalin ku saabsan halista uu ku keeni karo maandooriyaha, balse aysan waxba ka tarin wacyigalintaa, ayna u baahan yihiin in dalka laga mamnuuca, si loo Mustaqbalka ardayda isticmaasha u hagaago.
“Waxaa arkay ardayda qaar oo rabshad ka sameeya Fasalka, waxaan maqlay iyada oo la dhahaya waxa uu soo isticmaalay Taabuu, laakin ma hubo. Dhibaatadiisa ayuu leeyahay, xilliga aan Imtixaanka saxeyno waxaa ugu hooseeya kuwa aan ku maqlay in ay isticmaalaan. Runtii Macallin ahaan waxaan sameeyaa wacyigalin badan, sababtoo ah waan jeclahay ardayda. Waxaa dalban lahaa in dalkaba uusan soo galin, waayo Mustaqbalka Jiilkeena ayuu qaribayaa”.
Ka sokow doorsanaanta qofka inta uu u saaran yahay taabuuga, waxaa kaloo jira dhibaato caafimaad oo ay ugu weyn tahay in bushimaha uu ku yimaado dilaac taas oo sababi karta kansarka afka, si lamid ah dheecaan ayaa ka baxaya, wuxuuna waxyeelaynayaa dhuunta, Sida uu sharxayo Dr Maxamed Gureey oo kamid ah bahda Caafimaadka Muqdisho.
Dr Maxamed ayaa sidoo kale nala wadaagay in xitaa waxyeelo uu u geysan karo Wadnaha.
“Dhibaatooyin Caafimaad ee uu leeyahay waxaa kamida Kansarka ku dhaca, Afka, iyo Dhuunta, ma sahlanaya isticmaalka Taabuuga, laakin dhallinyaradu waxa ay moodaan, in ay firfircooni ka helayaan, waxaan u sheegayaa in saameyntiisa aysan dhaween, ka joogsaday dilaaga qarsoon, hallis badan ayuu xambaarsan yahay”.
Culimada, Waxgaradka, Macalimiinta iyo Waalidiinta intuba waxa ay si isku mid ah uga digayaan halista Maandooriyahan leeyahay,
Sheikh Cabduqaadir Tifow oo ka mida Culimada ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa ay Diintu ka qabto isticmaalka waxyabaha badala maanka Aadanaha.
“Diinta ayaa na fareysa in ay xaaraam tahay isticmaalka wax walba oo Maanka qofka baddela, waxaana kusoo arooray Aayado, iyo Axaadiis. Culimada doorkeeda wey qaadaneysaa sidii loo joojin lahaa Taabuuga, waxaase loo baahan yahay in sameeyo kahortag xoog leh, oo uusan dalka soo galin”.
Hadal badan oo aan daal laheyn, Dhidid tiro badan, mararka qaar qofka oo maqane jooga noqda, fahamka ardeyga oo aad u yaraada, dhaq-dhaqaaq faro badan iyo Ficillo kale waa Astaamaha lagu garan karo isticmaalayaasha Taabuuga Ama Maandooriyaha Tubaakada.
WQ: Cabdiraxmaan IbraahimAadam, oo ka tirsan Star FM Muqdisho.
Aragtida Wariyayaasha Soomaaliyeed & xeerka Saxaafadda ee dhaqangalka ah.
Maxay tahay Saameynta ay carruurtu ka dhaxlaan daawashada Shaashadaha Moobilka iyo TV-ga?